Natiijada Degmooyinkii U Horeeyay Ee Si Rasmi Ah Loo Shaaciyo Sida Loogu kala Guulaystay Kuraasta Doorashadii Golaha Deegaanka Somaliland Iyo Ururada Qaarkood Oo ka Waayay Hal Kusri – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Guddoomiyaha Komishanka doorahsooyinka ee degmadda Lughaya Cabdikariim Jirde Qawdhan ayaa si ramsi ah ugu dhawaaqay natiijadda doorashadii goleyaasha deegaanka ee degmadda Lughaya oo ka tirsan Gobolka Awdal.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in degmada ay ka codeeyeen 10386 (Toban Kun Sedex Boqol Sedeetan iyo Lix) qof, waxaana axsaabtu u kala heleen kuraasta degmadaa oo ah 13 Kursi sidan:- 6 Kulmiye ah, 3 xaqsoor ah, 2 Ucid ah iyo 2 Waddani ah.
Magacda xildhibaanada ururada ku guulaystay kuraasta Lughaya.
1 Cismaan Xadi Siciiid Ururka/ xisbiga Kulmiye
2 Maxamed Jaamac Diiriye Ururka/ xisbiga Kulmiye
3 Cabdilaahi Cali Awnuur Ururka/ xisbiga Kulmiye
4 Maxamuud Ibrahim Ismacil Ururka/ xisbiga Kulmiye
5 Cige Cali Xuseen Ururka/ xisbiga Kulmiye
6 Cismaan Faarax Tukaale Ururka/ xisbiga Kulmiye
7 Xaamud Maxamed Ducaale Ururka/ Xisbiga UCID
8 Sacad Nuur Xaaji Jaamac Ururka / Xisbiga Ucid
9 Cilmi Faarax Sugaal Ururka Wadani
10 Axmed Xuseen Badmaax Ururka Wadani
11 Xasan Maxamuud Dhimbiil Ururka Xaqsoor
12 Muumin Muuse Ducaale Ururka Xaqsoor
13 Ibraahim Jaamac Cige Ururka Xaqsoor
Iyadoo Ururada UMMADA, RAYS iyo Dalsan aanay wax kuraas ah ka helin demadii u horaysay ee lagu dhawaaqay.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Komishanka doorashooyinka ee degmadda Ood-weyne Axmed Ismaaciil Cawil, ayaa caawa ku dhawaaqay Natiijadda codbixintii doorashada deegaanka iyo kuraasta ay kala heleen Ururadu degmada Oodweyne oo ah tii labaad ee si rasmi ah loogu dhawaaqo.
Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in degmadda Oodweyne ay codkooda ka dhiibteen 22,737 cod, isla markaana ay axsaabta siyaasaddu u kala heleen 17-ka kursi ee Golaha deegaanka Oodweyne ka kooban yahay sidan:-
1)- Ururka UMMADDA waxa uu helay 8,993 cod, waxaanu ku guulaystay 7 kursi.
2)-Ururka WADDANI waxa uu helay 8,144 cod, waxaanu ku guulaystay 6 kursi.
3)-Xisbiga KULMIYE, waxa uu helay 1, 364 cod, waxaanu ku guulaystay 1 kursi.
4)- Ururka XAQSOOR, waxa uu helay 1,229 cod, waxaanu ku guulaystay 1 kursi.
5)-Xisbiga UCID, waxa uu helay 1,126 cod, waxaanu ku guulaystay 1 kursi.
6)-Ururka DALSAN waxa uu helay 1050 cod, waxaanay heleen 1 kursi.
7)-= Ururka RAYS waxa uu helay 840 cod, wax kursi ahna muu helin.
labadan degmo ee la shaaciyay natiijadooda ayaa ka mid ah 21 degmo oo doorashooyinka golayaasha deegaanka Somaliland ka dhaceen 28 Nov 2012.
Published November 30, 2012 By info